Masar: Sisi oo isa soo sharraxay - BBC Somali
Masar: Sisi oo isa soo sharraxay
Image caption Abaanduulihii hore ee ciidammada qalabka sida ee Masar Cabdulfataax al-Sisi
Abaanduulaha ciidammada qalabka sida ee Masar ahna wasiirka difaaca, Janaraal Abdul Fattah al-Sisi ayaa shaaciyay in uu iska casilay militariga si uu isugu sharaxo doorashooyinka madaxtinimo ee lagu wado in ay ka dhacaan dalkaasi bisha soo socota.
Khudbad uu taleefinka u mariyay qaranka ayaa abaanduulaha ciidammada - isagoo weli xiran dharka militariga - waxa uu ku dhawaaqay in uu iska cazilay militariga, si uu ugu tartamo xilka madaxweynanimada.
Cabdulfataax Alsisi ayaa sheegay in uu ka tanaazulayo labiskiisa militariga 44 sano kaddib si uu u qabto hawlgal cusub oo aad u adag.
Waxaa qasab ku aheyd in uu xilka abaanduulaha ciidammada uu iska dhiibo si uu u tartamo doorashada la filayo in ay dhacdo bisha soo socota.
Khudbadiisa, ayuu Mr Sisi ku sheegay in aanu "sameyn doonin mucjisooyin" waxa uuna ugu baaqay dadka Masar in ay midoobaan.
Dhanka kale xoghayaha xiriirka dibada ee guddiga arrimaha dibada ee Xisbiga Caddaalada iyo Xoriyadda ee qeybta ka ah ururka Ikhwaanul Muslimiinka haatan laga mamnuucay waddanka Masar, Maxamed Suudaan, ee uu saldhigiisu yahay Britain ayaa sheegay in iscasilaada Sisi aanay aheyn wax lala yaabo.
Cabdulfataax al-Sisi ayaanan ka cabsi qabin in uu guulaysan waayo. Oo waxa uu haystaa taageero ballaaran, ilaa iyo haatanna ma ay jirto cidd xafiiltan halis ah ku haysa.
Taageerayaashiisa ayaa u arka in uu yahay hogaamiye awood leh oo keeni kara xasilooni kaddib sanado jahwareer ah.
Dadka ka soo horjeedase waxa uu u yahay militari mayal adag, oo xilka ka tuuray dowlad la soo doortay.
Madaxii hore ee sirdoonka Masar ayaa dhaxli doona dhaqaale taag daran, mucaaradad sii kordhaysa, iyo qaran kala qeybsan.